टुसाएको गेडागेडी फाइदाका’री छ तर खानु अगाडी यति होस गरेमा मात्रै खानुहोस ।
स्वास्थ्य : टुसाएको गेडागुडी स्वास्थ्यकर हुन्छ । तर, यसको सरसफाईमा पर्या¥प्त ध्यान दिइएन भने यो हानि’कारक साबित हुन्छ । किनभने, जब यो टुसाउन थाल्छ, साथसाथै ब्याक्टे’रिया पनि पैदा गर्छ ।
हा’निकारक ब्याक्टे’रियाकै कारण अंकु’राएको गेडागुडीले शरीरमा प्रतिकुल असर पार्न सक्छ । यसले के कस्ता समस्या निम्त्याउँछ त ? छालामा संक्र’मण- अं’कुराएको काँ’चो गेडागुडीमा साल्मो’नेला नामक व्याक्टे’रिया पैदा हुन्छ ।
यसले छालामा सं’क्रमण निम्त्या’उँछ । फूड प्वा’इजनिङ – यस्ता खानेकुरा काँ’चै सेवन गर्दा यसमा रहेको लि’स्टीरिया नामक ब्याक्टे’रियाले फूड प्वो’इजन हुन सक्छ । मृगौ’लामा सम’स्या- धेरै मात्रामा अंकु’राएको गेडागुडी सेवन गर्दा त्यसमा रहेको लिस्टी’रिया नामक ब्या’क्टेरियाले मृ’गौलामा अ’सर पार्न सक्छ ।
टाइ’फाइड- यसमा पैदा हुने साल्मो’नेला टा’इफी नामक ब्याक्टे’रियाले टाइ’फाइडको समस्या ल्याउन सक्छ । यसका साथै ग्या’ष्ट्रिक, अ’ल्सर आदिको रोगीले पनि अं’कुराएको गेडागुडी सेवन गर्नु लाभदा’यक हुँदैन ।
यसले ग्या’सको समस्या अधि’क बढाइदिन्छ । पेट फुलिन्छ । किनभने प्रो’टिनलाई पचाउन निकै गाह्रो हुन्छ । अंकुराएको गेडागुडीमा प¥र्याप्त प्रोटिन हुन्छ ।
कसरी सेवन गर्ने ? : अंकु’राएको गेडागुडीमा ब्याक्टे\_रिया धेरै मात्रामा पाइन्छ । त्यसैले यसलाई काँ’चो खानु भन्दा उसिनेर खानु राम्रो हो ।
त्यो भन्दा पनि राम्रो उपाय भनेको, अंकुराएको गेडागुडीलाई बाफमा पकाएर सेवन गर्नु हो । क’ब्जियत, एनीमि’या, मधु’मेह, उच्च रक्त’चाप भएका र गर्भ’वती महिलाले बाफमा उसिनेर सेवन गर्नु पर्छ । अंकु’रित गेडागुडी बिस्तारै चपा’एर खानुपर्छ । यसको सेवन अधिक मात्रामा गर्नु हा’निकार’क हुनसक्छ ।
कहिले खाने ? : खाजा वा रातीको स्न्या’क्सको रुपमा सेवन गर्न सकिन्छ । अंकु’रित गेडागुडीको गुण : सहि ढंगले अंकु’राएको गेडागुडी सेवन गर्नु स्वास्थ्यका लागि एकदमै लाभदायक मानिन्छ । यो अंकुराउने प्र’क्रियामा जीवित हुन्छ, जसले हाम्रो शरीरका लागि भरपुर पो’षक तत्व प्रदान गर्छ । यद्यपी गेडागुडी अनुसार त्यसबाट प्रा’प्त हुने त’त्वपनि भिन्न भिन्नै हुन्छ । जस्तो, अं’कुरित दालमा पोटा’सियम र आ’इरन पाइन्छ भने काबुली चनामा कार्बो’हाइड्रेड, फा’इबर, प्रो’टीन, भिटामिन र मिनर’ल्स पाइन्छ ।
यी हुन् अंकुरित भोजन : अनाज – गहु, मकै, कोदो, जौं आदि । बिज – फर्सीको दाना, मेथी, खरबुजाको दाना । गेडागुडी – मुंग, चना, केराउ आदि । मु’गी, मास, सिमी, चना, के’राउ, राज्मा, भट’मास आदि गेडागुडीमा अत्यधिक मात्रामा प्रोटिन र फा’इबर पाइन्छ। त्यसैले यसलाई मासुको विकल्पमा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
गेडागुडीलाई टु’सा उमारेर खानु धेरै उत्तम। गेडागुडीमा मासुमा भन्दा पनि बढी अत्यधिक मात्रामा प्रोटिन हुन्छ तर, यसमा भएका सबै प्रोटि’न शरीरले सोस्न सक्दैन । टुसाएको गेडागुडी प्रयोग गर्दा शरीरले यसमा भएका सबै प्रो’टिनलाई सोस्न सक्छ ।
गेडागुडी टु’साउँदा यसमा प्रो’टिन र फाइब’रको मात्रा बढेर जान्छ । मि’नरल र भिटामिन पनि बढ्छ। नभि’जाएको गेडागुडी प्रयोग गर्दा आइरन, जिंक, म्याग्ने’सियम, क्याल्सि’यमलगायतका एन्टिन्यु’ट्रिसन त’त्त्वलाई यसले सोस्न दिँदैन । भिजाएर वा टु’सा उमा’र्दा त्यसरी शरीरलाई सोस्न नदिने त’त्व पानीमा घुलेर जान्छ ।
२०७८ जेष्ठ १२, बुधबार ०१:११ गते 1 Minute 454 Views